सर्गेई पेरीडेकि - रूसी फुटबल कार्यकर्ता, रूसी फुटबल प्रिमियर लीग को प्रमुख। उहाँ युरोपेली फुटबल समुदायको सदस्य हुनुहुन्छ। यूईईएमा स्थानहरू प्रमुख छन्।
आस्ट्राखान को एक देशी
सर्गेई पेरीडकिन अगस्त 1961 मा अस्टकहान मा जन्म भएको थियो। उनले कलिनिनको नाममा सैन्य कमांड स्कूलमा ओलमा आफ्नो उच्च शिक्षा पाएका थिए, जो कि राज्य सुरक्षा सेवा - केजीबीमा उपस्थित थियो।
राजधानीमा पहिले दोस्रो उच्च शिक्षा प्राप्त गरेपछि। Pryadkin को भौतिक संस्कृति को राज्य संस्थान देखि स्नातक गरियो। यो दोस्रो शिक्षा थियो जुन आफ्नो जीवनमा मुख्य बन्यो।
पहिलो उच्च शिक्षा प्राप्त गरे पछि, पेरीडेकिनले राज्य सुरक्षा निकायको सेवामा प्रवेश गर्यो। सोभियत यूनियनको पतन पछि, उनले केजीबीमा काम गरे, र 1 99 1 पछि, तिनी संघ संचार एजेन्सी र सूचना संचारको लागि सामेल भए।
राज्य सुरक्षाका अंगहरूमा विभिन्न पदहरूमा पेरीडेकिन सर्गेई गिनेडियइच 1994 मा काम गरे। त्यसपछि उनी खेलकुद समाज डिनोमोमा गए, जुन उस समय उनीहरूले नयाँ आर्थिक र राजनीतिक वास्तविकतामा कसरी लागू गर्न खोजिरहेका थिए।
खेलकुदमा पहिलो महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट, विशेष गरी फुटबलमा, पे्रीडकिनको लागि संगठन जीआरआरआरस थियो। खेलकूद कार्यकर्ताले यो परियोजनालाई जर्मन जर्मन - बर्लिन नजिकैको चार्लोटबर्गस्थित सानो शहरमा कार्यान्वयन गरेको छ। यो एजेन्सीको मुख्य गतिविधि फुटबल खेलाडीहरू, मुख्यतया रूसी, जसले विदेशी क्लबसँग अनुबंधहरू समाप्ति गरेको थियो। Pryadkin संग एक साथ, यस फुटबल परियोजना को सह संस्थापक मध्ये एक सोवियत फुटबल खेलाडी र कोच कोन्स्टेंटिन सरसनिया थियो, जो पछि एक सफल खेल एजेन्सी भयो।
प्रिमियर लिगको टाउकोमा
रुसी प्रिमियर लीग प्रीडिडेकिन्की सर्गेई गिनेदियइचमा काम गर्न 2001 मा आउनुभयो - यसको स्थापनाको वर्ष। धेरै वर्षसम्म तिनले 2007 मा विभिन्न स्थानमा राखे, जब सम्म उनले उक्त पदमा मिखाइल वोरोन्टोवलाई प्रतिस्थापित गरेको संगठनको प्रमुख भए।
साथै, रूसी फुटबल युनियनको संरचनामा Pryadkinkin सक्रिय रूपले काम गरे । 2005 मा, उहाँ यो संगठनको अध्यक्षको सल्लाहकार हुनुभयो। राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो कामको पहिलो दिन, विटिटी मट्कोले उनलाई उनको सल्लाहकार नियुक्त गरे ।
र वर्षको समयमा, नोभेम्बर 2006 देखि नोभेम्बर 2007 सम्म उनले संघको सामान्य निर्देशकको रूपमा काम गरे। यद्यपि, पहिलो6महिनाको अवधिमा अस्थायी छ।
खेलकुद सर्कलहरूमा, उहाँ स्पष्ट रूपमा "म्युको मान्छे "सँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। यो ठूलो खेलमा यस प्रकार्यको आगमनसँग थियो कि प्रिडकिनको करियरले सक्रिय रूपमा विकास गर्न थाल्यो। सबैभन्दा पहिले, यो रूसी फुटबल प्रिमियर लीग द्वारा महसुस भयो।
लीगका पूर्व नेताहरू
यो उल्लेखनीय छ कि प्रीमियर लीगले प्रिडडेकि भन्दा भन्दा बढी रूसी खेलहरूमा बढी महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको नेतृत्व गरे। त्यसोभए, पहिलो राष्ट्रपति खेलकुद विटाली म्युको थियो। उनी मास्को "लोकोमोटिव" वालरी फ्लोटोभोको पूर्व राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित भएको थियो, त्यसपछि मानसिक पद CSKA यूजीन गायनको अध्यक्ष, र पछि - मास्कोका "स्पार्टक" र "डिनोमो" युरी जवर्जिनका पूर्व-महानिदेशक निवासी हुनुहुन्थ्यो।
2001 देखि 2007 सम्म, रूसी फुटबल प्रिमियर लीगले पाँच नेताहरूको अनुभव गर्यो। नोभेम्बर 2007 देखि आजको दिनसम्म तिनीहरु मात्र सर्गेई पेरीडेकिन्कीको नेतृत्वमा छन्। लगभग 10 वर्ष पहिले नै।
लेभेनको साथ संघर्ष
फुटबल कार्यकर्ता प्रेडकिकि न केवल स्पोर्ट्स आधिकारिक रूपमा, तर पीला प्रेसका पृष्ठहरूमा प्रसिद्ध व्यक्तिको रूपमा पनि। विशेष गरी 2011 मा।
यो सबै पूर्व रूसी मिडफिल्डर व्लादिमीर लेभेनको, जो पूंजीको टोराडोलो र लोकोमोटिभ, रोस्तोभ रत्सस्लेमश, यारोस्लाव शिनिक, पर्म एमकर, व्लादिकोवकाज स्टार्टक र ग्रोज्नी टेरेकका लागि खेलेका थिए। फुटबल खेलाडी र रूसको कोचहरू।
लेभेनको द्वारा प्रारम्भ गरिएको पहिलो घटना मध्ये एक सर्गेई प्रिडिडकिन विरुद्धको एक चेताउनी थियो, जसको जिज्ञासा त्यो समय प्रिमियर लिगसँग नजिक थियो।
संघीय सदस्यहरू शर्मिंदा थिए कि पेरीडकिन एक साथमा प्रीमियर लीग को अध्यक्ष, आरएफयूका एजेन्सीहरूको एजेन्सीका प्रमुख सदस्य हुन्, र पनि एक कम्पनी चलाउँछ जसको सेवा एजेन्सी गतिविधि समावेश छ। साथै, आफ्नो साना भाइ, Pryadkin, Andrei को फुटबल मा एजेन्ट को काम को तथ्यों को जाँच गरियो।
विशेष गरी, लेनदेनको शुद्धता स्लोभेनिया फुटबल खेलाडी ब्रायन इलिको स्थानान्तरणमा सम्पन्न भयो जुन फुटबल क्लब "मास्को" र राजधानी "लोकोमोटोव" को लागि छोटो समयमा बोलेको थियो। र पनि एक र "रेलवेर्म" म्यागोमे ओडिडोव।
रूसी फुटबल युनियनको नैतिकताका लागि आयोगले पेरीडकिनको काममा रुचिको विरोध खोजिरहेको थियो। यद्यपि, प्रदान गरिएको डेटा पुष्टि भएको थिएन। आयोगको सदस्यहरूले कुनै उल्लङ्घन पाएनन्।
साँचो, पूर्व-फुटबल खेलाडी एवर्जी लेभेनको यो शान्त थिएन। यसलाई पछि फर्केर गयो, उनको व्यक्तिगत रुचि भयो। लेभेनकोको अनुसार, सन् 2009200 मा रामेनकेय "सैटर्न" मार्फत उनको पोर्टोडकिन, आफ्नो भाइ आन्द्रे सँगै अवैध रूपमा "400" अमेरिकी डलर "लाश" गरे। यस मा, विशेष गरी, आफु Pryadkin सर्गेई Gennadievich आरोप लगाए। प्रीमियर लीगले खेलाडीबाट आलोचना पाएका थिए।
परिणाम लेभेन्चेको स्विट्जरल्याण्ड लजनेस मा खेल मध्यस्थता अदालत को अपील थियो जसको निर्णय अझै पनि अज्ञात छ।
एकै समयमा, Pryadkin रूसी फुटबल प्रिमियर लीग को राष्ट्रपति को पद को लागी जारी राखन को लागि र आधुनिक रूसी खेलहरु मा एक मुख्य कार्यकर्ताहरु रहन को लागि जारी छ। Levchenko संग संघर्षले आफ्नो क्यारियरलाई महत्त्वपूर्ण असर पारेन। Pryadkin अझै रूसी खेलमा एक प्राधिकृत विशेषज्ञ बनी रहेको छ।
Lipoma: ट्यूमर को उपचार
बच्चासँग कविता कसरी सिक्न सकिन्छ?
"SpetsStroyGaz" इजेभ्स्क समीक्षाएँ। "SpetsStroyGaz": को कार्यकर्ता LLC "SpetsStroyGaz" समीक्षा
पुनर्वास, पुनर्वास को प्रकार। पुनर्वास विधिहरू
समस्याहरूको को समय: कारणहरू, परिणाम र प्रभाव पार्ने मा छोटकरीमा
विदेशी मुद्रा व्यक्तिहरूलाई लागि बचत बैंक खाताहरू: खाता कसरी खोल्न?
होटल Planeta5* (सनी बीच, बुल्गेरिया) फोटो र समीक्षा
बालुवा: सूत्र विनिर्देशों। निर्माण लागि बालुवा